Aadan Madoobe oo meesha ka saaraya rajada Laftagareen | KEYDMEDIA ENGLISH
Aadan Madoobe oo meesha ka saaraya rajada Laftagareen
Sida ay xogahu sheegayaan, inta badan musharixiinta is-beddel doonka ah, ayaa ku qanacsan mushaxnimada Aadan Madoobe, iyaga oo ka cararaya in Guddoomiyaha Golaha shacabka uu noqdo shaqsi Farmaajo u adeega sidii Maxamed Mursal.
MUQDISHO, Soomaaliya - Guddoomiyihii hore ee Baarlamaanka Dowladdii KMG aheyd, Aadan Maxamed Nuur [Madoobe], ayaa ka mid noqday musharixiinta u taagan qabashada xilka Guddoomiyaha baarlamaanka gaar ahaan Golaha shacabka.
Warka sheegaya inuu musharrax yahay, Guddoomiye ku xigeenkii Koowaad ee Rahanweyn Resistance Army [RRA], ayaa ku soo beegmaya xilli, Laftagareen iyo Farmaajo wadaan qorshe ay qof aan Digil iyo Mirifle ahayn ugu raadinayaan xilkaas.
Aadan Madoobe, waxaa gadaal ka taagan xubno ka tirsan mucaaradka oo uu ku jiro Madaxweynihii hore Sheekh Shariif, kaas oo Midowga Musharixiinta hore uga dalbaday in ay garab istaagaan Madoobe, oo isna shan sano mucaarad ahaa.
Laftagareen iyo Farmaajo, ayaa ka shaqeynaya sidii ay qof Hawiye ah uga dhigi lahaayeen, Af-hayeenka Golaha Shacabka, si musharixiinta xilka Madaxweynaha ee Haiwiye, looga hor istaago u baratanka kursiga ugu sarreeya dalka, taas oo u muuqata mid aan hirgali karin.
Sidii la filayay, waxaa muuqata in uusan mira dhali karin, is gaashaan-buureysi, sanadkii la soo dhaafay ay wadeen siyaasiyiin iyo odayaal dhaqan oo ka soo kala jeeda beelaha Raxanweyn iyo Dir, kaas oo la doonayay in wax looga baddelo awood qeybsiga.
Qorshahaan, oo ay gadaal ka riixayeen odayaal dhaqan iyo siyaasiyiin, ay ku jiraan Boqor Buurmadow, Mahdi Guuleed iyo Cabdicasiis Laftagareen, ayay hadda gaabis xooggan ku yimid, kadib markii la dareemay in Is-baheysigu olole u noqday Farmaajo.
Bilihii April iyo May 2010, waxaa soo shaac baxay khilaaf soo kala dhex galay Madoobe iyo Ra’iisal Wasaarahii xiligaas Cumar C/rashiid, kaas oo sababay in Madoobe uu iscasilo, waxaana beddelay Shariif Xasan Sheekh Aadan.